Unicode Version ==>
ကုမ္ပဏီ၏ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်အက်ပလီကေးရှင်းများတွင် လူကြီးမင်းက ဖြည့်စွက်ထားသော ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာ အချက်အလက် များကိုလည်း ကုမ္ပဏီက စုဆောင်းသိမ်းဆည်းနိုင်ပါသည်။ စားသုံးသူ၊ ဝယ်ယူသူများက အဆင်ပြေချောမွေ့သော၊ အလေ အလွင့်နည်းပါး၍ ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းသော အတွေ့အကြုံကို ရရှိခံစားနိုင်စေရန်၊ ဝယ်ယူသူ တစ်ဦးချင်း၏ လိုအပ်ချက် အတိုင်း ဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန် နှင့် ကုမ္ပဏီက ကုန်ပစ္စည်းများ ရောင်းချရာတွင်၊ ဝန်ဆောင်မှုများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် နှင့် စားသုံးသူ၊ ဝယ်ယူသူများနှင့် ဆက်ဆံရာတွင် ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန် လိုအပ်သည်ဟု ယူဆသော အချက်အလက်များကို သာ ကုမ္ပဏီက စုဆောင်း အသုံးပြုခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ လူကြီးမင်းအတွက် ဝန်ဆောင်မှုများ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန်၊ ကုန်ပစ္စည်း/ ဝန်ဆောင်မှု အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို အသိပေးရန်၊ ဝယ်ယူသူများကို အရည်အသွေးပြည့်ဝစွာ ဝန်ဆောင်မှုပေး နိုင်ရန်၊ လိမ်လည်မှု နှင့် ငွေကြေး ခဝါချမှုများကို လိုအပ်သလို စစ်ဆေးနိုင်ရန်၊ ကုမ္ပဏီ၏ လုံခြုံရေး အဆင့်အတန်းများ နှင့်အညီ လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ရန်၊ သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေများ၊ စည်းမျဉ်းများ နှင့် တရားရုံး အမိန့်များကို လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ရန်၊ သုတေသနပြုလုပ်ရန် နှင့် ကုန်ပစ္စည်းများကို ပိုမို ကောင်းမွန်အောင် ဆောင်ရွက်ရန်၊ CELLAR DOOR COMPANY LIMITED နှင့် ဆက်စပ်နေသော ကုမ္ပဏီများ၊ စီးပွားဖက်များ၊ ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများ၊ ဈေးကွက် ရှာဖွေရေး နှင့် သုတေသန အေဂျင် စီများ၊ ပြင်ပပုဂ္ဂိုလ်၊ အဖွဲ့အစည်းများ (အခြား အဖွဲ့အစည်းများ) က ရောင်းချသော ပစ္စည်းများ အကြောင်း၊ ဈေးရောင်း ပွဲများ၊ လျှော့ဈေးများ၊ အချက် အလက် များကို လူကြီးမင်းထံ အသိပေးရန် စသည့် ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် လူကြီး မင်း၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာ အချက် အလက် များကို အသုံးပြုရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ကုမ္ပဏီသည် အထက်ပါ ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် လူကြီးမင်း၏ အချက်အလက်များကို အခြား အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဝေမျှ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
CELLAR DOOR COMPANY LIMITED သည် web page အသုံးပြုမှုကို ခွဲခြား စိစစ်ရန်၊ အရောင်းမြှင့်တင်ရေး လုပ်ငန်းများ၏ ထိရောက်မှု ကို တိုင်းတာရန် နှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှု နှင့် လုံခြုံမှုတို့ကို မြှင့်တင်ရန် အချို့ ဝက်ဘ်ဆိုက် စာမျက်နှာများတွင် “cookies” ကဲ့သို့ အချက်အလက် ကောက်ခံသည့် အရာများကို အသုံးပြုပါသည်။ “Cookies” ဆိုသည်မှာ လူကြီးမင်း၏ hard drive သို့မဟုတ် ဖုန်း သို့မဟုတ် ကွန်ပျူတာ၊ လက်တော့ပ် (စက်ပစ္စည်း) တွင် ထည့်သွင်းထားသော အသေးစား ဒေတာဖိုင်များ ဖြစ်ပါသည်။ အသုံးပြုသူ မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း ခွဲခြားသည့် လုပ်ဆောင်ချက် (anonymous unique identifier) ပါဝင်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် အကူအညီပေးသော ပစ္စည်းဖြစ်ပါသည်။ အချို့ သော ဆောင်ရွက်ချက် များကို “cookie” မှတဆင့်သာ ရယူအသုံးပြု နိုင်ရန် စီစဉ်ထားပါသည်။ လူကြီးမင်းက ဝက်ဘ်ဆိုက် သို့မဟုတ် အက်ပလီ ကေးရှင်းကို အသုံးပြုနေသည့် အချိန်အတွင်း password ကို မကြာခဏ ထည့်သွင်းရခြင်း မရှိ စေရန် CELLAR DOOR COMPANY LIMITED က cookies ကို အသုံးပြု၍ စီစဉ်ထားပါသည်။ လူကြီးမင်းက စိတ်ဝင်စားသော အကြောင်း အရာများကို ဦးတည်ချက်ထား၍ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် Cookies က ကူညီပေးပြီး ယင်းမှတဆင့် အချက်အလက်များ ရရှိ နိုင်ပါသည်။ Cookies အများ စုသည် “session cookies” များ ဖြစ် ပြီး အသုံးပြုသည့် အပိုင်းတစ်ပိုင်း ပြီးဆုံးလျှင် လူကြီး မင်း၏ hard drive မှ အလို အလျောက် ပယ်ဖျက်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ လူကြီးမင်း၏ browser က ခွင့်ပြုပါက ကျွန်ုပ်တို့ အသုံးပြုသော cookies များကို လက်မခံဘဲ ငြင်းပယ်နိုင်ပါသည်။ ထိုသို့ လက်မခံပါက ကုမ္ပဏီ၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်ရှိ အချို့သော လုပ်ဆောင်ချက်များကို ဆောင်ရွက်၍ မရနိုင်ဘဲ အသုံးပြုနေသည့် အချိန်ပိုင်းအတွင်း လူကြီးမင်း၏ password ကို မကြာခဏ ပြန်လည် ထည့်သွင်းရနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် CELLAR DOOR COMPANY LIMITED မှ လွဲ၍ အခြား အဖွဲ့အစည်းများက ပြုလုပ်ထားသော ဝက်ဘ်ဆိုက် စာမျက်နှာ အချို့တွင် “cookies” သို့မဟုတ် အခြားအလားတူဖိုင် များကိုလည်း တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ CELLAR DOOR COMPANY LIMITED သည် အခြား အဖွဲ့အစည်းများ၏ cookies အသုံးပြုမှုအပေါ် မထိန်းချုပ်ပါ။
လူကြီးမင်းသည် CELLAR DOOR COMPANY LIMITED သို့ အီးမေးလ် သို့မဟုတ် စာများကို ကိုယ်တိုင် ပေးပို့လျှင် သို့မဟုတ် အခြားအသုံးပြုသူများ သို့မဟုတ် ပြင်ပ ပုဂ္ဂိုလ်များက ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်ရှိ လူကြီးမင်း၏ ဆောင်ရွက်ချက်များ နှင့် စပ်လျဉ်း၍ အီးမေးလ် သို့မဟုတ် စာများ ပေးပို့လျှင် CELLAR DOOR COMPANY LIMITED သည် အဆိုပါ အချက်အလက်များကို လူကြီးမင်း၏ အမည် ဖိုင်တွဲ ဖြင့် စုဆောင်းနိုင်ပါသည်။ CELLAR DOOR COMPANY LIMITED သည် တရားရုံး သို့မဟုတ် အခြား အစိုးရ ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများ က သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေများနှင့် တောင်းခံလာပါက၊ လူကြီးမင်း၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာ အချက်အလက်များ အပါအဝင် အချက် အလက်များကို ထုတ်ဖော်ပြောကြားရန် လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။
CELLAR DOOR COMPANY LIMITED သည် လုံခြုံစိတ်ချရသော ဆာဗာများကို အသုံးပြု၍ ၎င်း၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များ နှင့် အက်ပလီ ကေးရှင်းများကို အကာ အကွယ်ပြုလုပ်ထားပါသည်။ သို့သော် လူကြီးမင်းတို့၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာ အချက်အလက်များကို အင်တာနက်မှတဆင့် အသုံး ပြုခြင်း၊ အခြားနည်းလမ်းများဖြင့် ပေးပို့ခြင်း၊ မျှဝေခြင်းများကို အပြည့်အဝ လုံခြုံစွာ ဆောင်ရွက် မပေးနိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်များ နှင့် အက်ပလီကေးရှင်းများကို အသုံးပြုရာ၌ လူကြီးမင်းတို့၏ အချက်အလက်များ ပေါက်ကြားခြင်း သို့မဟုတ် CELLAR DOOR COMPANY LIMITED ၏ အခြား အဖွဲ့အစည်းများက အခွင့်မရှိဘဲ အသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ် နောက်ဆက်တွဲ ကြုံတွေ့ရ သော ဆုံးရှုံး မှုများအတွက် CELLAR DOOR COMPANY LIMITED တွင် တာဝန် တစ်စုံတစ်ရာ မရှိကြောင်း လူကြီးမင်းတို့က သဘောတူရမည်။ လူကြီးမင်းတို့၏ ပုဂ္ဂိုလ် ရေးရာ အချက်အလက်များ အပါအဝင် အချက်အလက်များကို သိမ်းဆည်းခြင်း၊ လုံခြုံရေး၊ အသုံးပြုခြင်း နှင့် ထုတ်ဖော် ပြောကြားခြင်း တို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဥပဒေက ခွင့်ပြုသော အများဆုံး အတိုင်းအတာအထိ CELLAR DOOR COMPANY LIMITED တွင် တာဝန် တစ်စုံတစ်ရာ မရှိ ကြောင်း ကြေညာ အပ်ပါသည်။
We also collect and store personal information entered by you on our website and apps. We only collect and use such information from you that we consider necessary for achievingaseamless, efficient and safe experience, customized to your needs, and to improve our consumer and business offerings and services. This may include using your information: to enable the provision of services to you; communicate account and product/ service related details; to provide you with quality customer care; to undertake necessary fraud and money laundering checks and comply with our security standards; to comply with applicable laws, regulations and judicial orders; for research and product improvement; to provide you with information, offers and promotions from CELLAR DOOR COMPANY LIMITED and its related companies, business partners, suppliers, marketing and research agencies and other third parties (other parties). We may also share your information with these other parties for these purposes.
If you send CELLAR DOOR COMPANY LIMITED personal correspondence, such as emails or letters, or if other users or third parties send us correspondence about your activities on the website, CELLAR DOOR COMPANY LIMITED may collect such information intoafile specific to you. CELLAR DOOR COMPANY LIMITED may be required to disclose information lawfully sought from it byajudicial or other competent body pursuant to applicable laws which may include your personal information.
Although CELLAR DOOR COMPANY LIMITED endeavors to safeguard our websites and apps though the use of secure servers your personal information and other transmissions made by means of the internet cannot be made absolutely secure. By using our website and apps, you agree that CELLAR DOOR COMPANY LIMITED has no liability for disclosure of your information and/or unauthorized acts of third parties CELLAR DOOR COMPANY LIMITED or for any losses which you may incur asaresult. To the maximum extent permitted by law CELLAR DOOR COMPANY LIMITED disclaims liability in relation to the storage, security, use, and disclosure of your information including your personal information in connection with.